नेपाल १९० रनमा अल आउट, १९१ रनको लक्ष्यलाई अमेरिकाले भेटाउला त ? - News20 Media
February 8, 2020 February 8, 2020 N20LeaveaComment on नेपाल १९० रनमा अल आउट, १९१ रनको लक्ष्यलाई अमेरिकाले भेटाउला त ?
काठमाडौँ । विश्वकप क्रिकेट लिग–२ अन्तर्गत शनिबार अमेरिकाविरुद्धको खेलमा नेपालले १९१ रनको लक्ष्य प्रस्तुत गरेको छ । टस हारेर पहिला ब्याटिङमा ओर्लिएको नेपालले चार बल बाँकी छँदै सबै विकेट गुमाएर १९० रन बनाएको हो । नेपालका लागि कुशल मल्ल र विनोद भण्डारीले अर्धशतकीय पारी खेलेका थिए । कुशलले आफ्नो डेब्यु खेलमै अर्धशतक बनाएका हुन् । उनले ५१ बल सामना गर्दै ४ चौका र तीन छक्का प्रहार गरी अर्धशतक पूरा गरेका हुन् । यस्तै भण्डारीले ५९ रनको योगदान गरे । ७९ बल सामना गरेका उनले ६ चौका र एक छक्का प्रहार गरे ।
मध्य क्रममा कुशल मल्ल र विनोद भण्डारीले टिमलाई केही सम्हालेका हुन् । ब्याटिङ लाइनको पुछारमा रहेका करण केसीले १२ रन बनाए भने सन्दीप लामिछानेले रनको खाता खोल्न सकेनन् । सुशन भारीले ११ र अविनाश बोहराले अविजित ५ रन बनाए ।